အလင်းသစ်နေ့စွဲများ: ကျွန်တော့်ဘဝ၏ အမှတ်တရ နေ့စွဲများ (Tag Post)
အမှတ်တရ နေ့စွဲ- (၁)
အဲဒီနေ့က အတိအကျဆိုရင် နေကျ၊ရေကျ အင်္ဂါနေ့ညပေါ့ (သူများတောင် နေတက် ၊ရေတက်ဆိုပြီး ကြွားကြသေးတာ ကိုယ်လည်း ရတာ ကြွားမယ်..:P)။။ ကျွန်တော့် အမေက သူ့ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဒုက္ခပေးမယ့် အ လိမ္မာတုံးလေးကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့နေ့လေ။။ ပြောမယ့်သာပြောရ ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းကို ကြောက်တယ်ဗျ။။ အမေ့ကို ကန့်လန့်တိုက်ပြီး ဒုက္ခပေးနေတာမို့ ကျေးလက် သားဖွားဆရာမက ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ပဲ ဆေးရုံ ပို့ရမယ်ဆိုပြီး မြင်းလှည်းပေါ် တင်ခါနီးမှ အလန့်တကြား တိုးထွက်လာတယ်ဆိုပဲ။။ (အမေ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဆိုးတိုင်း အဲဒီအကြောင်း အမြဲပြောပြလို့ အမှတ်ရနေတာလေ။။)
အမှတ်တရ နေ့စွဲ- (၂)
အဲဒီနေ့ကြောင့်ပေါ့ အတိအကျလိုလို အသေအချာလိုလို ကောလဟာလ သတင်းကြောင့် ဆယ်တန်းကျတယ်လို့ သတင်းကြီးနေတဲ့ကျွန်တော် အိမ်မှာမနေရဲပဲ ဦးလေးနဲ့လယ်ထဲ လိုက်သွားရတဲ့ အထိပါပဲ။။ (ဘယ်တုန်းကမှ မကျခဲ့ဖူးပဲ ကျတယ်လို့ ကြားရတော့ အောင်စာရင်းကို ရင်မဆိုင်ရဲဘူးလေ။။ :D) နောက်မှ အဖေက လိုက်ခေါ်လို့ မယုံမရဲ ပေကတ်ကတ်နဲ့ အောင်စာရင်းစာရွက်ကို သူများထက် နောက်ဆုံးမှ (သူများထက် အရင်လို့ ကြွားမရလို့.. :P) တစ်ယောက်တည်း သွားကြည့်ပစ်လိုက်တယ်။။ ဘယ်ရမလဲ ကျွန်တော်အောင်တယ်လေ..:D။။ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း ထွက်တဲ့နေ့ပါ... :P ။။။
အမှတ်တရ နေ့စွဲ- (၃)
အဲဒီနေ့က အောက်သားကျွန်တော် တောင်လှေကားမြို့တော်ရဲ့ ဆောင်းတွင်း အအေးဒဏ်ကို စခံရတဲ့နေ့ပါ။။ ပြီးတော့ အမှန်တကယ်သာ လိုက်နာနိုင်ရင် တကယ့်ယောက်ျားကောင်း ၊ယောက်ျားမြတ်တွေ မွေးထုတ်ပေးတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာ အင်ဂျင်နီယာ ပညာတွေသင်ယူဖို့ ပထမဆုံးခြေစချတဲ့ နေ့ပေါ့။။ ((၅)နှစ်တာ ရင်ငွေ့လှုံခဲ့တဲ့ ချယ်ရီရိပ်ခို အမိတက္ကသိုလ်ကို လွမ်းမိပါတယ်။။ :))
အမှတ်တရ နေ့စွဲ- (၄)
အဲဒီနေ့က ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ မြင့်မိုရ်တောင် တစ်ခြမ်းပြိုကျတဲ့နေ့ပေါ့။။ အဲဒီနေ့မှာ အ လိမ္မာတုံး ကျွန်တော့်ကို နို့ဖိုးတောင် ဆပ်ခွင့်မပေးပဲ အမေအပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။။ အမေမရှိတော့တဲ့ သိမ်ငယ်မှုတစ်မျိုးနဲ့ ဘဝကိုဖြတ်သန်းရတာ တကယ်ကို ခက်ခဲမှန်း အဲဒီနေ့ကတည်းက သဘောပေါက်မိသွားတယ်။။ :( :(
အမှတ်တရ နေ့စွဲ- (၅)
အဲဒီနေ့ကတော့ အမိတက္ကသိုလ်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကနေ ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခု၊ ရထားစီးခွင့် စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ ပုခုံးပေါ်မှာ တာဝန်တွေကိုတင် အပြောကျယ်တဲ့ လောကပြင်ထဲ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ ခရီးစဉ်တွေကို စတင်ခဲ့တဲ့ နေ့တစ်ရက်ပေါ့။။
အမှတ်တရ နေ့စွဲ- (၆)
ဘွဲ့လွန် ထပ်တက်ဖို့ ဆန်စားသူများရဲ့ ဌာနေ ရွှေပြည်ကြီးကနေ အာလူးစားသူများရဲ့ ဌာနေကို လေယာဉ်ပျံကြီး စီးပြီး ရောက်လာခဲ့တဲ့နေ့လေးပါ။။ (လေယာဉ်ဆိုရင် အမ်အေအိုင်ရဲ့ ရန်ကုန်-ထားဝယ် ဖော်ကာကြီး စီးပြီးကတည်းက အိပ်မက်ထဲတောင် မစီးရဲတော့တာ ..တော်ပါသေးရဲ့.. အဲဒီနေ့ကတော့ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် စီးရဲတဲ့ သတ္တိတွေ မွေးလို့ ရသွားခဲ့လို့... :D )။။။
အမှတ်တရတွေ ကတော့ အများကြီးပါပဲ။။ အဲဒီအထဲက ရက်စွဲ မှတ်မိနေ တာလေးတွေ ရေးချလိုက်တာပါ။။ ညီလေးကျစ်ပုရော၊ ညီမလေး သမန်းစီရော ကျေနပ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါရဲ့။ တချို့ရက်စွဲတွေက ကျတော့ မှတ်မိလို့ မကောင်းတာတွေ ရှိတယ်လေ။ "အမှတ်တရတွေရယ် လွမ်းဖို့ကို လက်မတို့ပါနဲ့ မျက်ရည်က စို့ချင်ချင်မို့" ဆိုတာလိုတွေကျတော့ ပြောတိုင်းမကောင်းလို့ ထားခဲ့လိုက်တော့မယ်... :P ။။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ အမှတ်တရ နေ့စွဲတချို့က ပျင်းဖို့ကောင်းနေရင်လည်း သည်းခံပြီးတော့သာ အားပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရဲ့ဗျာ.. :D :D။။ ဤ TAG ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ရုပ်ချောသူများက ပြုံးပြုံးကြီးနှင့် ဒီကောင်တော်တော် နောက်တယ်ဟု ပြောကာ ကွန်မန့်ပေးသွား ကြလေသတည်း။။။
Posted by အလင်းသစ် at 3:05 AM
♫♪★လွမ်းပိုင်ရှင်★♪♫: February 6, 2012 at 6:17 AM
အမှတ်တရတွေ တူးဆွသွားတယ်အစ်ကိုရေ `
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! February 6, 2012 at 4:02 PM
မနာလို ချင်စရာ ကောင်းနေတယ် ဆိုဒ်လေးက :):)
အင်း...ကွန်မန့်ကျတော့လည်း သတိထားမှ သူက ချုပ်ပြီး ကိုင်ပြီး ရိုက်တက်တာ
Tag Post လေး ဖတ်သွားပါတယ်ရှင်လို့..
မိစံ February 6, 2012 at 5:21 PM
မွေးထုတ်ပေးတဲ့ ကျောင်းကစီနီယာကြီးပေပဲကိုး)
ချောကလက်ကျူးပစ်လေး February 6, 2012 at 6:11 PM
မိုးငွေ့...... February 7, 2012 at 10:04 AM
ဤ TAG ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ရုပ်ချောသူများက ပြုံးပြုံးကြီးနှင့် ဒီကောင်တော်တော် နောက်တယ်ဟု ပြောကာ ကွန်မန့်ပေးသွား ကြလေသတည်း။။။
အဲဒီစာကြောင်းလေးနဲ့ပဲ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ မန့်သွားပါတယ်...။
မထူးဘူး ဖတ်ပြီးမှတော့ ရုပ်ချောတဲ့ လူတွေထဲ ချော်လဲ တက်ထိုင်လိုက်တယ် နောက်မှလာတာဆိုတော့ ရှေ့ ကလူငယ်တွေ ပေါ်တက်ထိုင်သွားဘီ..
စကားမစပ် စံစံက ဘက်ပဲ့တာကြည့်လုပ်နော် ..ဟိဟိ မျိုးသန္တာထွန်း သမီးလေး ..တစ်ဒါဇင်မောင်နှမ ရှိတယ်တဲ့..တိန်
ချစ်စံအိမ် February 7, 2012 at 5:25 PM
Thiha Lu Lin February 7, 2012 at 9:22 PM
အမေ ဆုံးတယ်တဲ့ ဒီတစ်ယောက်ကလည်း။ စိတ်မကောင်းဝူး ဖတ်ရင်း။ :'(
jasmine(တောင်ကြီး) February 9, 2012 at 10:06 AM
အမေ မရှိတော့ဘူးဆိုလို့အမတော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်
ညီရဲ February 9, 2012 at 2:52 PM
ဘဝရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို လာဖတ်ပါတယ်... နေ့ လ ခုနှစ်နဲ့ တကွ မှတ်မိနေတဲ့ မှတ်ဥာဏ်ကို ချီးကျူးမိတယ်...
san htun February 10, 2012 at 5:10 AM
ဒီကောင် တော်တော်နောက်တယ်လို့မန့် ဘူး :P
မောင်မောင် February 10, 2012 at 11:54 AM
စာအရေးအသား အရမ်းကောင်းတယ အစ်ကိုကြီးရေ။ ညီလေး အားပေးသွားပါတယ်။
mstint February 10, 2012 at 11:56 AM
မောင်အလင်းသစ် ဘဝရဲ့အမှတ်တရနေ့စွဲများ တဂ်ပို့စ်လေးက
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ ရက်စွဲလေးတွေပါလား။
မိခင်ဆုံးရှုံးတဲ့ခံစားမှုကိုစာနာမိသလို အောင်စာရင်းထွက်ပြီး ကောလဟာလကြောင့်
ကျရှုံးတာရဲ့ခံစားမှုကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာတယ်(တီတင့်ကတော့ခုနှစ်တန်းမှာတကယ်ကျခဲ့တား))
ဘိုဖြူ February 10, 2012 at 1:46 PM
မေမြို့မိုး February 10, 2012 at 5:50 PM
အားလူးစားရင်းနဲ့ပဲ ပြုံးပြုံးလေး ဖတ်သွားပါတယ်အစ်ကို.
မျက်စိလည်လမ်းမှားရောက်လာပြီး .... ဒီပို့စ်လေးအရောက် သဘောကျ၍ ပြီးပြီး ကောမန့်ရေးသွားတယ်.. =)
အမှတ်တရနေ့တွေကို အတိအကျ မှတ်မိနေတာ.. ချီးကျူးပါတယ်..
တတိယမြောက်သမီးတော် May 28, 2012 at 6:45 PM
ချောတဲ့သူတွေထဲ သမီးလဲ ပါတယ် နော် ခစ်..